Sanchez oo kalsooni ka muujiyay inay kaga guuleysan karaan Barcelona kulanka Champions League – Gool FM
(Milano) 07 Sebt 2019. Laacibka reer Chile ee Alexis Sanchez, oo xagaagan kusoo biiray kooxda Inter Milan ayaa cadeeyay qaabka ay guul ku gaari karaan kulanka ay Barcelona kula ciyaari doonaan wareega group-yada tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan.
Alexis Sanchez ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada rasmiga ah ee kooxda Inter Milan wuxuu ku sheegay:
“Waxaan doonayaa in joogitaankeyga halkan aan ku guuleysto koob, waa inaan dagaalanno oo aan wada joognaa, ugu dambeyntii taasi ayaa ah waxa ugu muhiimsan”.
“Sirta ka dambeysa gaaritaanka yoolalkaaga waa midnimada qolka dher badelashada”.
“Ciyaarta Barcelona waxay ii noqon doontaa mid qaas ah ee awoodeyda ciyaareed, Wax badan ayaan ku soo guuleystay halkaas”.
“Waxay noqon doontaa ciyaar aad u adag, laakiin waxaan dareemeynaa kalsoonida aan ku ciyaari karno kulankaas, waan guuleysan karnaa, gaar ahaan maadaama aan heysano ciyaartoy awood u leh inay sidaas sameeyaan”.
Si kastaba ha noqotee, laacibka reer Chile ee Alexis Sanchez ayaa suuqii dhawaa ee xagaaga ugu dhaqaaqay kooxda Inter Milan heshiis hal xili ciyaareed ee amaah ah, kaddib markii uu kaga yimid Manchester United.
Rashford oo si cad u sheegay sida ay kag go'an tahay inuu Harry Kane kaga sarra maro xulka qaranka England